Zeevou's Roadmap | Zvichauya | Zeevou
Zeevou's Roadmap yakazara nezvinhu zvinonakidza uye zvinoshamisa. Isu tiri kugara tichivavarira kuve pamberi peindasitiri nekusimudzira kupa kwedu uye kusundira miganho yezvinobvira.
Izvo zvinhu zviri pane yedu chimiro chekuvandudza nzira yemigwagwa inoiswa pamberi zvichibva pamhinduro yakawanikwa neyedu azvino Patrons. Isu tinobata matatu-vhiki Partner Host Foramu, uko kwatinoita nevatinobata navo uye tinoedza kutsvaga kuti ndezvipi zvakakosha zvakanyanya kwavari. Kubva pane izvi, isu tinoedza kuwana manzwiro ekuti mabasa anodikanwa nekukurumidza, uye isu tinoshandisa izvi kuzivisa marongero atinoshanda pazvinhu mukuburitswa kwedu kunotevera.
Mukufamba kwenguva tinotarisira kuzokwanisa kugadzira hurongwa uhwo hunotibvumidza kuita demokrasi kuita uku zvakanyanya uye nekuteedzera zvakanyatso kufarira kufarira kwakasiyana maficha.
Yedu Magician Chikwata chakanyanya kushanda mune izvo zvavanoita. We vaunza pamwechete mamwe ematarenda akanakisa kunze uko, uye vakavaka zvikwata zviviri zvevagadziri vanoshanda zvinoenderana neScrum system nzira. Kuve nezvikwata zviviri-zveimba zvakazvipira zvevagadziri zvinoreva kuti tinogona kuchinjika nekukasira kuchinjisa zvinodiwa pamusika, uye nekupindura zvinobudirira kune zvikumbiro zvevashandisi. Isu tinoshanda mumatatu-svondo macircule anonzi maprint, uye isu tinogadziridza iro gwara remugwagwa kana kamwe chete sprint kukupa iwe zano reizvo isu tiri kushanda pane yazvino sprint (yakanzi "Mukufambira Mberi"), chii chakarongwa "Inotevera" (1- 3 sprints kubva ikozvino), uye "Pasina nguva" (4-12 inomhanya uchienda).
Isu tinoedza kuve pachena sezvinobvira mune izvo zvatiri kushanda pazviri, sekudaro, isu tinoburitsa yedu Roadmap kune wese munhu kuti aone. Iyo nzira yemigwagwa inononoka uye inochinjika, zvichireva kuti isu tinogona kusarudza kufambisa zvinhu nekutenderera kana isu tasarudza kuti zvakakosha zvinoshanduka. Izvo zvinotevera uye nekukurumidza zvikamu saka zvinonyanya kuratidza. Iyo "Mukufambira mberi" ikholamu inoisa izvo zvatakaisa sechinangwa chekushandira pane yazvino Sprint. Kunyangwe isu tisingakwanise kuvimbisa kuti maficha ese achaunzwa kwese kwese, isu tinoita zvese zvatinogona kuti tigare tichizadzisa zvinangwa zvatinozvisarudzira.
Iwe kana uine chero mazano, ndokumbirawo ubatanidze yedu inotevera Partner Host foramu. Kune pfupi inotsanangudza vhidhiyo nezve Zeevou, tinya pano.
Zeevou kusangana pamwe neZapier kupa mukana wekuseta zvirinyore mafiriflow uye kubatanidza kune 2000+ maapp.
Kuwedzera kuchinjika mumabatiro anoita mauto avo Zeevou Subscriptions, kusanganisira kukwidziridzwa / kudzikira, shanduko kune ruzivo rwekubhadharisa, nezvimwe.
Bvumira kumisikidzwa kwemitemo zvichibva pamamiriro akasiyana siyana kuti mushandure mushanduko, kushoma & kugara kwakanyanya, kubata husiku hwenherera, uye kuvhara mazuva epamusoro pazviteshi.
Mira kutengesa & rega kusimbisa maemail ekusimbiswa ari kukonzereswa panguva yekusetwa
Bvumira kune akawanda-booking mepu yeisina kuburitswa yuniti mhando bookings.
Imba yekuchengetedza App Kuvandudza
Tumira zvigadziridzo zvemubhedha zvebhuku rega rega kune wemba
Wedzera kugona kuwedzera katsamba pebasa rega rega rakatumirwa kumuchengeti wemba
Bvumira kuti zvigadziriswe zvenguva yezuva apo zviziviso zvinotumirwa kune vanochengeta dzimba kumabasa matsva
Email Template Kuvandudzwa
Ongorora zvikanganiso zvekuperetera mumatemplate emaemail asipo
Ita nyore kuumba yakashambadzirwa tsika maemail templates
Gadzira default pre-check-out uye post check-out matemplate
Webhusaiti Zvivakwa Peji Dhizaini
Natsiridza dhizaini yeiyo chivakwa peji pane yakananga kubhuka webhusaiti. Patsanura mifananidzo neyuniti mhando.
Wedzera mutero sechirevo kubhucha nekuwedzera-ons.
Sangana neGoogle Hotera Ads.
Webhusaiti Yekumhanyisa Kuvandudza
Natsiridza iyo yekumhanyisa kumhanyisa pamapeji akasiyana ewebhusaiti yakananga.
Mobile App (Yekugamuchira)
Yekutanga nharembozha app yekubvumidza varidzi kuti vagadzirise mabhuku parwendo kuburikidza nefoni nhare.
Kupatsanura Kuverengera Rate Zvirongwa
Bvumira kusarudzwa kwehurongwa hwehuwandu kana uchipatsanura kubhuka kuti uve nechokwadi chekuti chaicho chinogona kusarudzwa.
Ita kuti zvive nyore kutsanangura yekuchenesa-wedzera kune yega yega unit mhando
Shandura iyo yekubhadhara maitiro ekuwedzera-ons anoda admin kubvumidzwa
Deredza kutengeswa kwekutanga cheki-mukati uye kunonoka cheki-kunze mawedzero ezuva rimwe chete shanduko-pamusoro
Chinja Nhoroondo Kuwedzera
Wedzera mimwe minda kuti uongororwe munhoroondo yekuchinja
Rega kuitirwa kwetsika basa uye nekugadziridzwa manejimendi manejimendi.
Sanganisa Zeevou ne Quickbook Online.
Mitemo Yekubhadhara & Kudzima Mitemo
Bvumira otomatiki kutenderedza mazwi ekubhadhara uye marambiro ekudzima.
Occupancy Report Kuvandudza
Ratidza huwandu hwakazara hwehusiku hwakatakurwa, huwandu hwakazara hwehusiku huripo, uye pavhareji urefu hwekugara kwenguva yakasarudzwa. Bvumira kuti mushumo umhanyiswe kweinopfuura mwedzi mumwe panguva uye upe mwedzi pamwedzi kuenzanisa kuratidzwa.
Yakavharirwa Zuva reKubhucha Shanduko
Bvumira yekushandura rakadzivirirwa zuva kubhuka.
Bvumidza kubhuka kweboka zvese zviri zviviri maererano nezvikamu zvakawanda zvematanho akafanana, pamwe nekudzokorora kweMon-Fri bookings. Bvumira kubatanidzwa kwemavovovo emabhuku akasiyana mukubhuka kumwe chete.
Trigger Rule Kuvandudza
Gonesa kuumbana kweMitemo yekutanga
Wedzera muenzi-based trigger mitemo
Wedzera basa-based trigger mitemo
Bvumira mamiriro ezuva-e-evhiki
Wedzera zvisina kupihwa kubhuka senge musiyano
Iko kugona kuumba chinhu.
Unganidza maProfessional Guest
Chinyorwa chevashanyi chimiro chinobatanidzwa.
Ndiwedzere Stripe kudyidzana kune OAuth 2.0.
Rega kubhuka kubviswa.
Nharembozha App (Maintenance)
Tichave tichishanda pane chimwe chinhu chakatarwa kuti chibvumidze iwe kugovera mabasa kuvashandi vekugadzirisa uye kuvabvumira kuti vaone izvi nekukuvandudza pane kufambira mberi kwavo kuburikidza neapp mobile.
Sangano Rezita Shanduko
Bvumira admin manejimendi kuti vachinje avo esangano zita ivo pachavo
Ipa chinongedzo chekubhuka muOTA muZeevou email yekusimbisa yemabhuku matsva.
Mibvunzo & Quotes
Gadzira maviri matsva ekubhuka mamiriro - mibvunzo uye makotesheni. Kubvunza hakufanirwe kuvharira kuwanikwa, nepo chitaurwa chichifanira.
Gadzira maficha ekutungamira varidzi vanobatana neZeevou kuburikidza neyakaisirwa-kumusoro maitiro.
Bvumira kuwedzera-pane kubviswa.
Musi Fomati Export
Bvumira kuti zvigadziriswe mumafomati ezuva e CSV / Excel kunze kwenyika.
Tsvaga Algorithm Kuvandudza
Kuvandudza algorithm yekutsvaga kwewebhusaiti yekubhuka kuti iratidze kwete chete zvinoenderana nemazita emaguta, asi kuratidzawo zvivakwa padhuze neshoko rekutsvaga / post kodhi iri kutsvaga.
Tichave tichishanda mukuvandudza kumhanya kwekukwirisa kwemawebhusaiti ekubhuka.
Wedzera-ons for Extensions
Kubvumidza kugadzirisa kweayo mawedzero-anofanirwa kugadzirwa patsva pakutambanudza kubhuka.
Rudzi rweChipenga Kubvisa
Rega kubviswa kwemhando dzemhando.
Yuniti & Yuniti Type Kubvisa
Kubvumira kubviswa kweyuniti uye mhando dzemhando pasi pemamwe mamiriro.
Ita shuwa kuti kero yekuvaka inoshandiswa kwete pane kero yezvivakwa zvezvivakwa zvine zvakawanda zvivakwa (zvine akasiyana kero).
Gadzira peji rekutendera vashanyi kuti varege kuzvinyoresa kubva kushambadziro maemail.
Bvumira kuregererwa kwekuchengetedzeka dhipoziti uye / kana ID yekuongorora mitemo yevaenzi vane chekuita nekambani kambani.
Vashandi Mbiri Kuvandudza
Bvumira kugadzirwa kweTimu muprofita yevashandi.
Zeevou Direct Blog Zvinyorwa
Bvumira kugoverwa kwemablog blog kuburikidza neZeevou Direct.
R & A Kuvandudza
Bvumira kuburitsa kunze kweR & A Karenda.
Kugonesa matema-kunze mazuva kusabvisa mamwe mazuva kubva mukusimudzira.
Gonesa changig yezuva rekutanga muR & A Calendar.
Bvumira kumashure kwekuvhara kubvumidza kuvharirwa kwemazuva kunyangwe kana akawiriranwa pamwe neakave abhuka.
Taura kumberi kubhuka windows neakagurwa-nguva.
Bvumira kutsanangurwa kweR & A negero.
Auto-block x mazuva mushure mekubuda.
Bvumidza kuitisa imwe mari yevaeni husiku.
Bvumira kusefa nemusi unoshanda mugiyo rekuwanikwa.